‘Chipo hachina zera’ | Kwayedza
‘Chipo hachina zera’
01 Jun, 2018 - 00:06	 2018-06-01T02:39:04+00:00 2018-06-01T00:03:53+00:00 0 Views
MUKOMANA ane makore 19 okuberekwa ari kusimukira munyaya dzekutsikisa mafirimu okurudzira vamwe vechidiki kuti vasatye kutaridza matarenda avo achiti chipo hachina zera. Paul Zibgowa – uyo achangobva mukubura firimu rake rinonzi Triangled Love – anoti vechidiki havafanire kutyira kure asi kuti vanofanira kutaridza matarenda avo.
“Ndiri mumwe wechidiki akwanisa kutsikisa mutambo muno Zimbabwe zvisinei nemakore angu 19 okuberekwa. Ndiri kupa mucherechedzo wakanaka nekuda kwekutsikisa kwandakaita firimu rangu rinonzi Triangled Love. Zvekuti vamwe vezera rangu vanga vachizvitarisira pasi vave kuona kuti kana ini ndakazviita naivo vanokwanisa kuzviitawo vachitondidarika,” anodaro Zibgowa.
Zvisinei, anoti hazvina kuve nyore kuti ange achitsikisa firimu iri.
“Zvainge zvisina kupfava kutsikisa firimu asi kunyangwe zvakadaro ini nevamwe vangu takakwanisa kuti rionekwe kunzvimbo dzinoburirirwa mafirimu nenyanzvi mune zvemafirimu muHarare,” anodaro.
Anoenderera mberi achiti, “Tichiri kushingairira kuti rionekwe nzvimbo dzose nevanhu vakawanda vari kunzwa nezvaro asi vasati variona.”
Triangled Love mutambo wakanyorwa naMichael Mutonhiwa uri pamusoro pemusikana ane vakomana vaviri apo mumwe anove mwana waminister aine mari.
Zvisinei, musikana uyu anenge achinyanya kuda mukomana asina mari asi anoshaya zvekuita nekuti anenge achidawo mari zvakare kubva kune mumwe mukomana wake anove shoroma.
Zibgowa anoti chishuwo chake ndechekuti kudai Hurumende yapindira ichibatsira indasitiri yemafirimu, zvikuru vechidiki vanenge vachiri kusimukira.
“Ndinoti kudai Hurumende ikapindira ichibatsira nemari kana nemidziyo yatingade uyewo ichidzikisa pairesi nekuti zvikadaro zvemafirimu zvinosimukira nekuti vazhinji vari kuzosiira panzira nekuda kwekupererwa nemari nekushaya zvimwe zvekushandisa. Sesu tinenge tichiri kusimukira, hatina kwatinokwanisa kukwereta mari yekuti tifambise basa redu,” anodaro.